Qorshaynta Dhul - Bogga 2 - Geofumadas
Laga bilaabo Oktoobar 25 illaa 27, 2011, Shirweynihii Labaad ee Maamulka Dhulka iyo Baarista waxaa lagu qaban doonaa Guatemala iyadoo la magacaabi doono "Isugeynta gogosha maamulka dhulka iyo horumarka." Waa ku qanacsanaanta weyn inaan kor u qaadno dadaalkan, oo ku biiraya isbeddel joogto ah sannadihii la soo dhaafay ee dalkan, halkaas oo ...
Koorso ku saabsan suuqyada dhulka aan rasmiga ahayn iyo sharciyeynta
Sidee (cabirka) degsiimmadaha aan rasmiga ahayn loo qeexaa oo loo cabiraa? Sidee degsiimooyin aan rasmi ahayn loo soo saaraa? Maxay yihiin xadadka suurtagalnimada (qiimeynta waxtarka leh) ee barnaamijyada sharciyeynta? Maxay yihiin isbeddelada iyo isbeddellada ku dhaca nooca degsiimooyinka aan rasmiga ahayn ee Latin Amerika? Maxay wax soo saarka aan rasmi ahayn u sii jirayaa ...
Koorsada Dhaqanka ee Territorial Territory
Xarunta Bolivian ee Daraasaadka Multidisciplinary (CEBEM) iyo Xarunta Daraasaadka Jaamicadda Sare ee Duqa Universidad de San Simón (CESU-UMSS) waxay ku dhawaaqayaan 8aad. Nooca koorsadan hordhaca ah ee ku saabsan Maareynta Dhulka, oo loogu talagalay xirfadleyda ka kala socota dhammaan meelaha iyo dadka daneynaya inay ogaadaan, qoto dheer, falanqeeyaan iyo isweydaarsiga shuruudaha doorka ...
Injineernimada, GIS iyo Maareynta Deegaanka: Koorsooyinka soo dhowaada
Uguyaraan kuwani waa koorsooyin iman doona Latin Amerika, hadda suurtagalnimada in lagu codsado iyaga ayaa la heli karaa: Suuqyada Dhulka: Dhacdada: koorsada Hababka Astaamaha ee Suuqyada Dhulka ee Laatiin Ameerika Taariikh: Oktoobar 19 ilaa 23, 2009 Goobta: Soo koobida San José, Costa Rica: Koorsadan waxaa loogu talagalay in lagu barto ...
Maalgelinta Horumarinta Magaalooyinka
Waa magaca madasha caalamiga ah ee lagu qaban doono Tijuana, Mexico, laga bilaabo Sebtember 24 illaa 26, 2009. Waxay noogu muuqataa arrin aad muhiim ugu ah deegaanka Latin Amerika, gaar ahaan maxaa yeelay waxay ku saleysan tahay waaya-aragnimada dalalkan. Waana kuweena aan aragnay habab loogu talagalay qorshaynta isticmaalka dhulka oo lagu fikiray ...
Dhaqdhaqaaqyada Macluumaadka Muuqaalka Guatemala
Nooca Nooca Kaabayaasha Xogta ee Guatemala oo uu diyaarinayo Xoghayaha Guud ee Qorsheynta iyo Barnaamijyada ee Madaxtooyada SEGEPLAN waa mid xiiso leh. Waxaan ku aragnay bandhigga fiidiyowga ee Moisés Poyatos iyo Walter Girón oo ka socda SITIMI 4th. shirarka gvSIG; dhamaadka soo bandhigida waxay xuseen in IDE-yada ay ...
AutoDesk Bentley Systems Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah mapserver SHP
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GvSIG, tabo cusub, Maamulka Land
Waxaad bilaabaysaa dibloomada OT
Taariikhda bilowga daabacaadda cusub ee Dibloomada Sare ee Maareynta Dhulka iyo Qorshaynta (DSPOT) ayaa kusii dhowaanaysa simistarkan koowaad ee sannadka 2009. Tani waxay ka dhici doontaa Antigua Guatemala, oo ay dhiirrigelinayso hay'adda DEMUCA Foundation iyo ka-qaybgalka Machadka Lincoln . DSPOT waxaa loogu talagalay labada mas'uul iyo saraakiisha ...
Anigoo ah Congress of Recovery Congress Latin America
Iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo suurtagalnimada helitaanka aqoonta iyo khibrada khubarada caalamiga ah iyo kuwa qaranka ee ku saabsan qadarinta qiimeynta, Machadka Lincoln wuxuu ku dhawaaqayaa shirweynihii qiimeynta Latin America ee Koowaad, kaas oo u adeega inuu wax ka barto khibradaha magaalooyinka kala duwan ee Colombia iyo kuwa kale. dalalka, si loo dhiso ...
Seminar Caalami ah oo ku saabsan Qorsheynta Xuduudaha
Laga bilaabo Janaayo 27 illaa 29, 2009, Seminaar ku saabsan Maareynta Dhulka ayaa lagu qaban doonaa Lima, oo loogu talagalay xirfadlayaal (oo ay ku jiraan siyaasiyiin) oo ka shaqeeya mowduucyada maareynta dhulka, waxaa ka mid ah dadka reer Brazil, Peruvians iyo Paraguay. Ka digtoonow maadaama maadadani ay noqonayso mawduuc ...
Koorsada Jadwalka Guud ee Guatemala
Laga bilaabo Nofeembar 23 illaa 28, daabacaadda toddobaad ee Koorsada Suuqyada Dadban ee Rasmiga ah iyo Nidaaminta Dejinta ee Latin America ayaa lagu qaban doonaa Guatemala, oo lagu baran doono Guatemala. Koorsadan waxaa dhiirrigelinaya Machadka Lincoln oo kaashanaya Ururka Hagaajinta Guryeynta ee Guatemala (MEJORHA), Kulliyadda ...
Law of Territorial Territorial Guatemala, V4
Nooca afraad ee Sharciga Maareynta Dhulka Guatemala ayaa la heli karaa, shaqo mataleysa ballanqaadka iyo taageerada dad badan oo ku lug leh sameynta soo jeedintan cusub dokumenti qaabaysan oo ka wanaagsan. Noocani wali waa qabyo, marka faallooyinka waa la soo dhaweynayaa. Waxay umuuqataa mid aad u dhameystiran, waxay leedahay mowduucyo la qaaday ...
7 koorsooyin bilaash ah oo internetka ah
Waxaa farxad weyn ah inaan ku dhawaaqno koorsooyinka cusub ee Machadka Lincoln ee Siyaasadda Dhulka oo hadda uun billaabay 7 fursado cusub, oo dhammaantood ka fog, khadka tooska ah iyo bilaash. Dhammaantood waxay bilaabmayaan Sebtember 1 waxayna dhammaanayaan Oktoobar 19, 2008, markaa way adag yihiin. Muddada la dalbanayo ayaa xirmi doonta ...
Shirarka Aduunka ee Qorshayaasha
Shabakada Global Planners Network waxay bishan codsatay in laga caawiyo faafinta qayb ka mid ah shaqadooda taas oo bixin doonta macnaha guud ee doodaha ku saabsan Shirweynihii 4aad ee World Urban ee UN Habitat (WUFXNUMX), oo lagu qaban doono Nanjing sanadkan. . Kahor daabacaaddii afaraad ee WUF, Shirweynihii Adduunka ...
Halkan waxaa ku yaal garaafka shirka aan hadda bixiyay, ee ku saabsan cadastre-ka badan, xiriirkiisa la leh caddeynta Cadastre 2014 iyo qalloocinta kale. In kasta oo ay fiicantahay in lagu muujiyo PowerPoint, halkan waxaa ku soo gabagabeynaya xoogaa ah:
cadastre, egeomates My, Maamulka Land, topografia
Tababarka Cadastarada ee Peru
Ugu dambeyntiina, Machadka Cadastral ee Lima (ICL) wuxuu qabtaa tababar ku saabsan arrimaha cadastral iyo GIS, kaas oo uu ku doonayo inuu ku caddeeyo shaqaalaha bixin kara adeegyadooda iyadoo la raacayo heerarka rasmiga ah iyadoo laga dhigayo aasaas farsamo hababka kala-guurka dowladda. ILC waa hay'ad dowladeed oo baahsan oo ka tirsan maamulka magaalada weyn ee ...
Sida loo Dilo Xeebta
Sawirrada la muujiyay waxay ka yimaadeen Bella Vista, Panama waxayna muujinayaan sida xeeb iyo mangrove ay ugu baaba'aan geeddi-socodka isbeddelka / baab'inta ee dhismaha magaalooyinka iyadoon la qorsheyneyn. Sawirkan, xeebta waxaa lagu muujiyay 1953, oo aan wali waddo la socon, iyada oo geedka loo yaqaan 'mangrove' oo dhan uu ku yaal xagga sare ee sawirka. Sawirkan, 1959, ...
Waa maxay kan ugu horreeya, cadastare ama Amar dhuleed?
Dhowr maalmood ka hor, hoolka hudheelka waxaan kula kulmay Bolivian iyo Faransiis ah oo ila soo qabtay ujeeddooyin la-talin bilaash ah ... iyo waxyaabo kale waxay i weydiiyeen wax la mid ah tan: Cadastre ma lagama maarmaan baa u ah qorsheynta dhulka? Ma sameyn kartaa qorsheynta dhulka adiga oo aan lahayn cadastre? Ma awooddaa ...? Markaa markaa geofume ...